Ilhaan Cumar: Obaama wuxuu ahaa dilaa hadal macaan - BBC News Somali
9 Maarso 2019
Lahaanshaha sawirka NEW YORK TIMES
Image caption Ilhaan Cumar iyo Barak Obama
Xildhibaanadda Minnesota ee Ilhaan Cumar ayaa ku karbaashtay madaxweynihi hore ee dalka Mareykanka Baraak Obama wareysi ay siisay wargeysku Poletico cadadkiisi Jimcaha soo baxay.
Waxayna Ilhaan sheegtay "Madaxweynaha Obama muddadii uu madaxweynaha ka soo ahaa dalka Mareykanka barnaamijyadiisa siyaasadidihiisa uu dalka ku hagayey iyo isbaddallada uu sheegayey inuu dalka ku keenayo ay ahaayeen khiyaali aan waxba ka jirin."
Waxayna carabka ku dhufatay inuu isagu lahaa dardar gelinta carruurta yar yar in waaliddiintooda lagaga reebo xadka Mexico iyo waddama badan oo caalamka ka mid ah in dagaal lagu qaado, iyada oo sheegtay inuu wax farqi ah u dhaxeyn madaxweyne Obama iyo Madaweyne Trump.
"Ma aha inaan ka cadhoonno Trump oo keli ah Obaamana siyaasaddiisu waxba kama duwaneyn tan Trump" ayey tiri Ilhaan.
"Siyaasadihiisa waxay ahaayeen kuwa aad u xun, laakiin dadki xilka isaga kaga dambeeyeyna waxay iyaguna dajisteen khidda siyaasadeed oo la mid ah siyaasaddi Barak Obama.
"Arrintaasi ma aha mid aan dooneyno iney dalka ka sii jirto, mana dooneyno qof walba inuu dil geysto aanna lagala xisaabtamin dilka uu geystay. Waana inaan aqoonsannaa siyaasadda dhabta ah ee ka dambeysa wajiga qurxoon iyo farxadda been ee ay dilaanimadu ku qrsoon tahay."
Hadallada cudub ee ka soo yeeray Ilhaan Cumar ayaa laga cabsi qabaa inuu culeys siyaasadeed oo hor leh uu ku keeno Gabadha Muslimadda ee dhalashada Mareykanka haysato oo muddo afar sana ahna ku soo jirtay xera qoxooti oo ku taalla dalka Kenya kaddib marki ay qoyskeeda ka soo qaxeen dagaalladi sokeeya ee ka qarxay dalka Soomaaliya.
Bisha February, oo ay laba bilood oo keli ah ay shaqada ku jirto Ms Ilhaan waxaa boggeeda Tweetarka ay ku soo qartay hadalla ka dhan ah Yahuudda, Guddoomiyaha baarlamanaka Mc Carthey oo ka duuleyso hadalka Ilhaan waxay sheegtay iney tillaabbo sharci ah ka qaadeyso cid walba oo ka tirsan aqalka Congreska ee cambaareyn iyo aflagaaddo u geysta Yahuudda.
Daawo: Wareysi aan la yeelanay Ilhaan Cumar
Cambaareynta Ilhaan Cumar waxay si gaar ah diiradda ugu saartaa Yuhuudda Mareykanka iyo Lacagaha Yahuudda lagu taageero iyada oo sheegta lacagta Mareykanka ay ka helaan Yahuuddu iney ku daadiyaan dhiggaa dadka reer Falastiin.
Ms Ilhaan waxay cambaareyn cusub kala kulantay marki ay markale boggeeda Tweetarka ku soo daabacday farriimo kale oo muujinaya yuhuud neceyb.
Garabka bidix ee xisbiga Jamhuuriga uu hoggaaminayo, xubin laga soo doorto Alexandria Ocasio-Cortez, wuxuu sheegay hadallada cambaareynta iyo neceybaka isugu jira ee ku soo badanaya xubnaha sare ee dowladda iyo mudanayaasha la soo doortaba ay sii xumeeynayaan xaaladaha qaarkod.
Lahaanshaha sawirka JP
Image caption Hadalka Ilhan Cumar ayaa waxaa aad uga xanaaqay dadka ay ku weyntahay Yuhuudnimada
Eliot Engle oo ka mid ah mudanayaasha Yahuudda ee laga soo doorto New York wuxuu sheegay inuu doonay inuu aqalka congeresska la horkeeno motion ku saabsan sidi loo joojin lahaa hadallada yuhuud neceybka ee bariyahan dambe isa soo tareysa.
Iyada oo ay maalmo taagnaayeen khilaaf iyo ismariwaa xooggan oo u dhaxeeyey xildhibaannada aqalka Congresska, Guddoomiyaha Aqalka Nancy Pelosi ayaa waxay ku guuleysatay khilaafki taagnaa iney soo afjarto oo isafgarad lagu dhammeeyo.
Ilhaan Cumar iyo Rashiida Tlain oo ah labadii gabdhood oo muslim ah oo ugu horreysay oo ku biiro aqalka congresska hadallada isdaba joogga ee laga dhadhaminayo yahuud neceybka ayaa waxay ka careysiisay qaar ka mid ah xubnaha aqalka oo ay ka soo wada jeedaan xisbiga Dimuqraadiga.